UJOEY BADA $$: IHLABATHI LOQEQESHISO LWEALBHAMU - IINDABA
I Knights zasehlotyeni
Enye yezona zinto zimangalisayo zokuxubusha zika-2012 zenziwa ngumntwana okwishumi elivisayo wase-Flatbush ogama lingu-Jo-Vaughn Scott aka Joey Bada $$, kodwa umfutho owonwabisayo Ngo-1999 ilahlekile kwi-mixtape yakhe yesibini, I Knights zasehlotyeni .
Enye yezona zinto zixabisekileyo zika-2012 zenziwa ngumntwana okwishumi elivisayo wase-Flatbush ogama linguJo-Vaughn Scott aka Joey Bada $$, umfundi wase-Edward R. Murrow High School owathumela umculo we-rap weeLwimi zesiNtu ngomlo okhohlisayo xa usenyuka Pro Era ngokudibeneyo. Ukubeka nje, umntwana angadlwengula. Nokuba kungangakanani ukuhamba kwakhe kungqina umsebenzi woovulindlela abakhethwe kakuhle (uMos Def, oqhelekileyo, uQ-Tip, iDoom), izakhono zakhe zazinjalo Ngo-1999 yayiyinto entsha, eyamkelekileyo yokujikeleza kwimiba enxibe kakuhle.
Ukususela kolo lonwabo lokuqala, kuninzi okwenzekileyo. NgoDisemba, omnye wabahlobo bakaJoey, uPro Era's Capital STEEZ, ngelishwa wazibulala phakathi isaqhwithi samarhe angaqhelekanga , ukubhalela Isiphelo Ngobusuku apho wazibulala khona. Ngexesha elifanayo nokusweleka kuka-STEEZ, uJoey wasala isicelo sokusayina kunye ne-Jay-Z's Roc Nation imprint, kamva esithi kuya kuthatha i-3 yezigidi zeedola kwangaphambili ukumtyikitya (A $ AP Rocky, owaphakama waduma phantse ngokufanayo ubudala, kuthiwa ufumana elo nani kwi-RCA). Yonke idrama iyatsalela ezantsi I Knights zasehlotyeni , irekhodi elineemigodi kwibhanki enye ye-90s yeempembelelo zerap kodwa ikwenza njalo ngengqondo engalunganga ngakumbi, ye-fuck-the-world. Umdlandla wehlombe okhuthazayo Ngo-1999 ilahlekile, kwaye I Knights zasehlotyeni sisindululo esinamafu kakhulu.
Nokuba igcwele ngombala omnyama kune-mixtape yakhe yaseburhulumenteni, iindawo zokuchukumisa zihlala ziziva zincinci. Iqala ngamazwi: Ngandlela thile umdlalo we-rap undikhumbuza ngomdlalo womgibe / Ngokwenyani iyafana, kwaye ezi ngoma kukuqhekeka kwam 'caine, raps Joey kwiiPhupha eziMnandi. Imigca yenqaku efana nokufezekisa iimfuno zakho ngemifaniso engafaniyo / yokutshica engaqhelekanga, ubeke loo nto kwifamily (Hillary $ wank) isixa sobubhanxa obudlakadlaka. Kukho intetho eninzi malunga nezifaniso kunye nezenzi, imethaphysics, kwaye kukho imbeko ngqo: Uxolo uBonita usika i-A Tribe Called Quest's spacey space classic Bonita Applebum, kwaye kukho ingoma ebizwa ngeLizwi Is Bond. Yinto enye ukubetha ngokungqinelana neereferensi, ukuzikroba ngendlela egungqisa imixholo esekwe kunye nesigama somculo we-rap. Kodwa indlela yokuziva iyacima. Thatha ukusweleka kweYOLO, ingoma eyakhiweyo ethembisayo, emnandi ehlekisayo- umlinganiswa ophambili wale ngoma ufile, ethathe u-YOLO kude kakhulu. Kutheni uyihambisa ngobuso obuthe tye?
Konke okuthethileyo, I Knights zasehlotyeni inemveliso eyomeleleyo. Ukuba kuye kwafuneka ndikhethe irekhodi loLwimi lwesiNtu ukuyithelekisa nalo, ibiya kuba sisiqingatha esingasemva sohlanga olubizwa ngokuba yi-Quest Ukubetha iiRhymes kunye noBomi , Apho izitshixo, ii-hi-hats, imigibe, kunye ne-basslines ezisezantsi zixubana nokwenza ibhedi efudumeleyo yokuthungwa ukuze ikhululeke ngaphezulu. UJoey usenakho rap, kodwa abavelisi bayaqhubeka I Knights zasehlotyeni -Amaqabane ePro Era uChuck Stranger, uKirk Knight kunye noLee Bannon abaneengoma ezizodwa eziveliswe yi-DOOM, iStatik Selektah kunye ne-Oddissee ngokwahlukeneyo- zezona zinto zibalaseleyo apha. Ngelixa into enje nge #LongLiveSTEELO iyinto echaphazelayo, enentliziyo esuka kuJoey-- ngokusisiseko nguhlobo lukaJoey lokuba Ndiza Kukukhumbula, ugqibezele ngoKholo u-Evans-njenge-backup- uyi-16 yeengoma ezinzulu kwizinto ezingenaludwe.
Endaweni yokwamkela izimbo zontanga abanomdla ngakumbi kwaye ugoba ezo zandi ngendlela yakhe-kubonakala ngathi kufanelekile kwimozulu yanamhlanje ye-rap, ukuba ufuna ukusebenza nenkulu kwaye udlalwe kunomathotholo- I Knights zasehlotyeni ihamba kwelinye icala, ibuyela kwiitemplate ezenziwe kakuhle ngaphandle kokongeza nantoni na kuzo. UJoey ujongene nobunzima, kodwa uziva enzima. Iingoma ze-clunky bezingayi kuba yinto enkulu ukuba i-lyricism kwimodi yamagorha akhe yayingeyiyo enye yemicimbi awayeyidlala ngabom. Kodwa ingxaki enzulu yenye yeethoni. UJoey uhlala ephuma ekhangeleka okomntu esele ediniwe yile nkqubo, i-curmudgeon eneminyaka eli-18 ubudala, eyahluke mpela kumandla Ngo-1999 wathembisa.
shabaka kunye nezinyanya
Freddy Gibbs ikhava ye-albhamu
iingoma eziphezulu zika-2006
Ukufa okungapheliyo kungena ikhava ye-albhamu
Imixube ye-r & b 2016